Ukufaka isicelo soqhawulo-mtshato ngenkxaso yomthetho? Silapha ukukunceda
Umthetho woqhawulo-mtshato » Ukufaka isicelo soqhawulo-mtshato
Ngaba uyafuna ukufaka isicelo sokuqhawula umtshato? Emva koko udinga igqwetha lokuzinziswa okusemthethweni komtshato wakho. Law & More ilungele ukukunceda. Nje ukuba wena kunye neqabane lakho niqhawule umtshato, imibuzo ebalulekileyo iphakama.
UKUFAKA ISICELO SOKUFUMANEKA?
Ngaba uyafuna ukufaka isicelo sokuqhawula umtshato? Emva koko udinga igqwetha lokuzinziswa okusemthethweni komtshato wakho. Law & More ilungele ukukunceda.
> Uqhawulo-mtshato ngokubonisana
> Uqhawulo-mtshato olungahlukaniyo
> Isivumelwano soqhawulo mtshato
> Isicwangciso sokuba ngumzali
> Ukwahlukana nabantwana
Nje ukuba wena kunye neqabane lakho niqhawule umtshato, imibuzo ebalulekileyo iphakama.
• Yeyiphi imicimbi ebandakanyekayo kuqhawulo mtshato?
• Ngubani oza kuqhubeka ehlala ekhaya kwaye ngubani oza kushiya indlu okanye indlu iya kuthengiswa?
• Lunakekelwa njani ukhathalelo lomntwana wakho (ren)?
• Yintoni ekuvunyelwene ngayo malunga nokuhlawulwa komntwana neqabane lomlingane?
• Kwaye zeziphi izivumelwano ozenzayo malunga nolwabiwo lwezinto zakho?
Ngaba ufuna uncedo lwezomthetho ekuphelisweni koqhawulo-mtshato, uyilo lwesivumelwano soqhawulo mtshato kunye nesicwangciso sokuba ngumzali? Law & More izokukunceda ugqibezele uqhawulo mtshato. Amagqwetha ethu anolwazi olukhethekileyo kwicandelo lomthetho wosapho. Siza kukunceda ukuba unqwenela ukufaka isicelo soqhawulo mtshato okanye ukuba wena neqabane lakho nifuna ukulungisa uqhawulo mtshato ngesivumelwano.
Ukuba wena neqabane lakho niyakwazi ukubonisana kunye nokufikelela kwizivumelwano kunye, siya kunceda wena neqabane lakho ekwenzeni izivumelwano ezicacileyo ngexesha leentlanganiso eofisini yethu. Emva kokuba kwenziwe izivumelwano malunga noqhawulo mtshato, siyaqinisekisa ukuba ezo zinto zibhalwe ngokuchanekileyo kwisivumelwano soqhawulo mtshato kunye nesicwangciso sobuzali. Nje ukuba isivumelwano soqhawulo mtshato senziwe kwaye sisayinwe nguwe neqabane lakho, iinkqubo zoqhawulo mtshato zihlala zingagqitywa ngokukhawuleza.
Ngelishwa, ukungavisisani phakathi kwamaqabane ex ngamanye amaxesha kuphezulu kakhulu, kangangokuba akusekho sengqiqweni ukubamba ukubonisana kunye nokufikelela kwizivumelwano ezidibeneyo. Emva koko ungeza kuthi ukuba ufuna uncedo lwegqwetha eliza kuxoxa nawe ngalo lonke icandelo lezomthetho. Sijonge ukufezekisa owona mphumo ufanelekileyo unakho. Ngokwenza njalo, siqwalasele ngononophelo nganye into esemthethweni. Umtshato woqhawulo mtshato kunye nesicwangciso sokukhulisa abantwana sisiseko sekamva lakho kunye nekamva lomntwana wakho (ren). Kungenxa yoko le nto kubaluleke kakhulu ukucinga malunga nomxholo wala maxwebhu kunye Law & More igqwetha. Ngale ndlela unokuqiniseka ukuba zonke izivumelwano ziya kubhalwa phantsi ephepheni ngendlela echanekileyo esemthethweni.
Isivumelwano soqhawulo mtshato
Isivumelwano soqhawulo mtshato, kuthetha ntoni oko? Isivumelwano soqhawulo mtshato sisivumelwano esibhaliweyo phakathi kwakho neqabane lakho. Umnqophiso uqulethe zonke izivumelwano malunga, phakathi kwezinye izinto, iqabane le -onyony, ukuhanjiswa kweziphumo zekhaya, ikhaya lomtshato, ipension kunye nokusasazwa kwemali. .
Isicwangciso sokuba ngumzali
Unabo abantwana abancinci? Ukuba kunjalo, kunyanzelekile ukuba kwenziwe isicwangciso sokukhulisa njengomzali. Umgaqo woqhawulo mtshato kunye nesicwangciso somzali zombini ziyinxalenye yesicelo sokufaka uqhawulo mtshato. Kwisicwangciso sokuba ngumzali, kwenziwa izivumelwano malunga nemeko yokuhlala yabantwana, ukuhanjiswa kweholide, izivumelwano malunga nokukhulisa kunye namalungiselelo okutyelela. Siya kukunceda ukuba wenze kwaye urekhode izivumelwano. Senza nokubalwa komntwana kwi -onyony.
Ezi zinto zilandelayo ziyimfuneko:
• Ukwahlulwa kwayo yonke imisebenzi yokunyusa nokukhulisa abantwana;
Izivumelwano malunga nendlela enokwazisana ngayo malunga nabantwana;
Isixa kunye nexesha le -onyony eya kuthi wena okanye iqabane lakho lihlawule intlawulo yokukhulisa abantwana;
• Izivumelwano malunga nokuba ngubani ohlawula iindleko ezizodwa, njengokumisa inkampu ngeempelaveki kwiklabhu yezemidlalo.
Ukongeza kwizinto ezisisinyanzelo, kububulumko ukwenza izivumelwano malunga nezifundo wena neqabane lakho ezifumana zibalulekile. Ungacinga ngezi zivumelwano zilandelayo:
Izivumelwano malunga nokhetho lwesikolo, unyango kunye nee-akhawunti zokonga;
• Imigaqo, umzekelo malunga namaxesha ebhedi kunye nesohlwayo;
Ukunxibelelana nosapho, oomakhulu nootatomkhulu, oomakhulu, oomalume kunye noomalume.
Ukufaka isicelo soqhawulo-mtshato akuyiyo kuphela impembelelo enkulu kubomi bakho kunye neqabane lakho, kodwa nakwabo bomntwana wakho (ren). Ukuqhawuka komtshato kuya kukhokelela ekubeni iqabane lakho liqabane lakho langaphambili. Nangona kunjalo, oku akuthethi ukuba iqabane lakho langaphambili liya kuba ngumzali wesibini. Ukusebenza kunye neqabane lakho lomtshato ngexesha nasemva koqhawulo-mtshato kufuna umzamo omkhulu. Nangona kunjalo, abazali abasebenzisanayo babaluleke kakhulu kwintlalo-ntle yabantwana. Akukho qhakamshelwano okanye unxibelelwano olonakeleyo nomnye wabazali lunokuba neziphumo ezibi emntwaneni. Nokuba unabantwana abancinci okanye abadala, kubalulekile ukuba umdla wabo uthathelwe ingqalelo kwinkqubo yoqhawulo mtshato..
Ukuqinisekisa ukuba abantwana bakho babandezeleka kancinci ngenxa yoqhawulo mtshato, kubalulekile ukwenza izivumelwano ezicacileyo. Sikunika iingcebiso zomthetho kwaye uthethathethane egameni lakho.